ကိုကြောင်ကြီး သို့ (ပေးစာ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » ကိုကြောင်ကြီး သို့ (ပေးစာ)
ကိုကြောင်ကြီး သို့ (ပေးစာ)
Posted by မြစပဲရိုး on Mar 19, 2013 in Aung San/Aung San Suu Kyi | 28 comments
ကိုကြောင်ကြီး ပြောတဲ့ “အဝေဖန် မခံနိုင်ရင် နိုင်ငံရေး မလုပ်နဲ့။” ဆိုတဲ့စကားကို အင်မတန်သဘောကျပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကတော့ အခုချိန်မှာ တကဲ့နိုင်ငံရေးသမား ဖြစ်သွားကြောင်း ဝေဖန်ကြပါတယ်။
သူကတော့ နဂိုထဲ က ဝေဖန်ရေးတွေ အပေါ်မှာ အရည်ထူနေပုံပါဘဲ။ အဲဒီ ဝေဖန်ရေးတွေကိုလဲ လစ်လျုရှုပြီး ထားမယ်လဲ မထင်ပါဘူး။ အဲဒီပေါ်မှာ ဒေါသထွက်တာ၊ မာန်တက်တာတွေလဲ ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အဲဒီ ဝေဖန်ရေးတွေပေါ်မှာလဲ Feedback ပြန်ယူတတ်သူဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါရဲ့။
ကျွန်မတို့ ဘေးက လူတွေကသာ အရည်မထူနိုင်တာပ။
ဒါကြောင့်လဲ နိုင်ငံရေးသမား မလုပ်တာပေါ့။
အမှန်တော့ လုပ်ချင်တာမှ အရမ်းပါဘဲ။
တစ်ခြားသူတွေကတော့ ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်ကြတယ်မသိဘူး။
ကျွန်မ နိုင်ငံရေးလုပ်ချင်တာကတော့ ငယ်ကထဲက ရှိခဲ့တဲ့ ထရော်မာတစ်ခု ကြောင့်ပါ။
ကျွန်မအရမ်းချစ်တဲ့ မြို့ငယ်လေး တစ်ခု ရှိတယ်။
အဖိုး အဖွား ရပ်ရွာပေါ့။
ဦးနုတို့ လက်ထက်က အတော်လေးစည်ပင်တယ်လို့ ပြောတာဘဲ။
ကျွန်မ မှီတဲ့ ဦးနေဝင်း လက်ထက်ကျတော့ အဆိုးကြီး မဟုတ်တောင် စည်ပင်မှုလေး နဲနဲ ရှိသေးတယ်။
ကျွန်မ ၁၀တန်းပြီးတော့ အဲဒီသွားပြီး ကလေးတွေကို လုပ်အားပေးစာသင်ခဲ့သေး။
အဲဒီတုန်းက အဖေရှာဖွေနိုင်ရင်ဘဲ တော်ရုံထမင်းဝကြပါတယ်။
ဒီတော့ ကလေးတိုင်း ကျောင်းကို သနပ်ခါးအဖွေးသားနဲ့ အေးအေးလူလူ တက်နိုင်တာပေါ့။
အသက်ကြီးသူတွေ အတွက်လဲ ဆေးရုံ/ဆေးခန်း အားထားစရာရှိသေးတယ်။
အဲဒီအချိန် ကျွန်မ ကျင်လည်တဲ့ မြို့အသိုင်းအဝိုင်းမှာလဲ ရာထူးကြီးကြီး ရှိလဲ အရမ်းမသုံးဖြုန်းနိုင်ကြပါဘူး။
နယ်ဖက်က ရိုးရိုးသားသား စီးပွါးရေးသမား တွေကတောင် သူတို့ထက် ပိုတတ်နိုင်ပါတယ်။
၈၈အပြီး ဒီဖက်ခေတ် စစ်အစိုးရလက်ထက် မှာတော့ အနိုင်ကျင့် အာဏာသုံးပြီး တစ်ကိုယ်ကောင်း ကိုယ်ကျိုးရှာ တာတွေများလာတော့ သာမာန်လူတွေ စီးပွါးရေးချွတ်ချုံ ကျလာတယ်။
ကျွန်မချစ်တဲ့ မြို့လေး လဲ တဖြေးဖြေးယိုယွင်းလာတယ်။
ကလေးတွေ စာသင်ချင်ရက် နဲ့ စာမသင်နိုင်တော့ဘူး။
တစ်ချို့ စာသင်ခန်းပြူတင်းပေါက် အပြင်ကနေ ထင်းစည်းရွက် ပြီး စာလိုက်ရွတ် နေကြတဲ့ အကြောင်းဟာ ကျွန်မထွင်ပြီး ပုံပြောနေတာ လို့ ထင်လား။
ဟိုးအရင်က အဝေးက ဧည့်သည်တွေလာရင် စေတနာအပြည့် နဲ့ ကောင်းနိုးရာရာ စေတနာ နဲ့ အတင်းကျွေးတတ်တဲ့ သူတွေမှာ သူတို့ အတွက်တောင် စားစရာ ရှားလာတာ။
လူငယ်တွေ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် ပျက်စီးကုန် တာ။
သက်ကြီး တွေ နေဝင်ချိန် ဘဝ မလှတာ။
အဲဒါတွေက ကျွန်မရဲ့ မြို့ငယ်လေးမှာတင်မဟုတ်ဘူး။ မြန်မာပြည် အနှံ့ဘဲ။ ရာခိုင်နှုန်း အတော်များများ ချွတ်ခြုံ ကျလာတာ။
အဲဒီ အချိန် ဒီဖက်မှာတော့ ခေတ်ပျက်သူဌေးတွေ၊ အာဏာ ပါဝါ တန်ခိုး နဲ့ နေ့ချင်း သုံးဖြုန်းမကုန် ဖြစ်လာသူတွေ ရှိလာတယ်။
လူတန်းစား ကွာဟမှု အရမ်းကြီးလာတယ်။
ပြောရရင် လက်တစ်ဆုတ်စာ လူတန်းစားက တစ်ပြည်လုံး ရဲ့ ဘဏ္ဍာတွေကို သိမ်းကြုံးယူနေတာ။
ကျွန်မ သူတို့ ကို အပြစ်မတင်ပါဘူး။
လူဆိုတာ အများစုကတော့ အခွင့် ရချိန် ကြွယ်ဝမှုမှာ ယစ်မူး မှာအမှန်ဘဲ။
ဒီတော့ ကျွန်မတို့ဟာ လက်ရှိ အာဏာရှင်တွေ ကို (လူ) အနေနဲ့ တိုက်ဖို့ကြိုးစားလာကြတာ။
လူနာမည်တတ်ပြီး ဖြုတ် ထုတ် သတ် ဖို့ အာဃာတ တွေ နဲ့ လုပ်လာကြတာ။
တကယ်တော့ ဒါဟာလဲ မှားပါတယ်။
သေနတ်ကိုင်ပြီး အာဏာရှင်လုပ်နိုင်ခွင့် ရှိသ၍ တစ်ဗိုလ်ဆင်း၊ တစ်ဗိုလ်တက် လုပ် နေ မှာဘဲ။
လူ ကို တိုက်လို့ကတော့ ဒီလူ ပြီး နောက်လူ ဆက် ဆက်ပြီး ကြီးစိုး မှာဘဲ။
ကျွန်မတို့ အခုချိန် ကြိုးစားရမှာ က လူတွေ ကို အမုန်းပွါးပြီး တိုက် နေတာထက် အာဏာရှင် စနစ်ဆိုးကြီး ပျက်ပြီး စံနစ်ကောင်း တစ်ခု ဖြစ်လာဖို့ ကြိုးစား မှ နည်းမှန်မယ် ထင်ပါတယ်။
စံနစ်ကောင်း တစ်ခု ရလာချိန် လူ့သဘောအတိုင်း ဖောက်ပြန်နိုင်တဲ့ လူတွေ ကို အဲဒီ စံနစ်က ထိန်းသွားမှာ အသေအချာပါ။
ဒါပေမဲ့ စံနစ်ကောင်း မရခင်မှာတော့ အဲဒီစံနစ်ကောင်း ကို တည်ဆောက်ပေးမဲ့ လူကောင်း တွေ လိုပါတယ်။
လက်ရှိ အာဏာ ပါဝါ မှာ ယစ်မူးပြီး နေရာမက် နေသူတွေ ဟာ လူကောင်းတွေ မဟုတ်သလို
အရေးအခင်းမှာ တို့အရေး ထအော်ပြီး နေရာရဖို့ နေရာ ရှိ သူတွေ ကို အပြုတ်တိုက် ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်သူတိုင်း လဲ လူကောင်း မဟုတ်တာ သေချာပါတယ်။
သူတို့ဟာသူတို့ နေရာ အတွက် ဘဲ ကြိုးစားနေသူတွေ ဖြစ်လို့ သူတို့ နဲ့ ကတော့ ဘယ်တော့မှ စစ်မှန်တဲ့ စံနစ်ကောင်း မရပါဘူး။
လက်ရှိ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် စဉ်းစားပေးတတ်သူမှဘဲ ပြည်သူ့အကျိုးပြု စံနစ်ကောင်း ကို တည်ဆောက်ပေးမှာပါ။
အဲဒီလို လူတွေက အများစု ပြည်တွင်းမှာဘဲ ရှိနေကြတာပါ။
ကျွန်မလဲ ကိုယ်ချစ်တဲ့ မြို့လေး အတွက် ဆင်းရဲရင်ဆင်းရဲပါစေ။ ကျောင်းဆရာမ လုပ်ပြီး အဲဒီမှာ နေသင့်တာပေါ့။
ကျွန်မ အဲဒီလို နေဖို့ သတ္တိမရှိပါဘူး။
ကျွန်မ ကိုယ့်အနာဂါတ် အတွက် အပြင်ကိုတောင်ထွက် ခဲ့တာဘဲ။
ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့ကတော့ အပြင်မှာ တင့်တောင့်တင့်တယ် နေနိုင်ပါရက်နဲ့ အဆင်းရဲခံ၊ အနာဂါတ်အပျောက်ခံပြီး နိုင်ငံ ကိုချစ်ကြောင်းပြပါတယ်။
ဟန်လုပ်ပြတာမဟုတ်တာ၊ နေရာအတွက်မဟုတ်တာ အသေအချာ သက်သေပြခဲ့ပြီဘဲ။
ဒီလို နိုင်ငံချစ်တဲ့သူဟာ သူ့နိုင်ငံ တိုးတက်ဖို့ နဲ့ သူ့ပြည်သူတွေ ချမ်းသာဖို့ အတွက် ဘဲစဉ်းစားမယ်။
လက်ရှိ အာဏာရှိ သူ တွေကို အမုန်း နဲ့ အပြုတ်တိုက်ဖို့က သူ့ရည်ရွယ်ချက် မဟုတ်ဘူး။
သူချစ်တဲ့ ပြည်သူတွေ ကောင်းစားဖို့ ရရာနည်း အကောင်းဆုံး နည်း ကို သူသုံးရမှာဘဲ။
ဒီတော့ ပေါင်းသင့်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီး အလုပ်လုပ် မှာ အသေအချာပါ။
ဒါကို အပြစ်မြင်သူတွေ ဆိုတာ
လက်ရှိစစ်တပ်ကို မုန်းနေသူတွေ၊ အာဏာရှင် ဆိုတဲ့ (လူ) ကို အညိုးထားတိုက် မဲ့သူတွေ၊ ဒီလူတွေ သေဖို့ ဆိုရင် တစ်ခြားဘာမှ မကြည့်တဲ့ သူတွေ၊
တနည်း အဲဒီ အာဏာရှင်တွေ နေရာ ကို ဆက်ခံ ချင်နေတဲ့ သူတွေ၊ ပြည်သူတွေ အတွက် လုပ်ရမယ် ဆိုတာ ကို နဲနဲလေးမှ ခေါင်းထဲ မထားသူတွေ။
ကျွန်မ ကတော့ ကျွန်မချစ်တဲ့ မြို့လေး အတွက်ကိုတောင် အလုပ်လုပ် မပေးခဲ့နိုင်တဲ့ မိန်းမမို့
ကျွန်မချစ်တဲ့ မြို့လေး ကိုသာမက တပြည်လုံး အတွက် စေတနာ အပြည့်နဲ့ အလုပ်လုပ်ပေးနေသူ တိုင်း ကို အမြဲဦးညွတ် ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မို့ ထောက်ခံတာမဟုတ်ဘူး။
ကျွန်မချစ်တဲ့ မြို့လေး ကို စည်ပင်လာအောင် ကြိုးစားနေသူမို့ ချစ်ခင် လေးစား အားပေး တာ။
သူ လုပ်နေသမျှ အမှန်အမှား ပြောဖို့ကလဲ ကိုယ်က သူ့လောက် စာဖတ်သူ၊ အတွေ့အကြုံရှိသူ၊၊ နိုင်ငံအတွက် အချိန်ပြည့် စဉ်းစားနေသူ မဟုတ်လေတော့ ဘယ်လို လုပ် ဝေဖန် ထောက်ပြ ပါ့မလဲ။
ဒီလိုဘဲ ကျွန်မလို တစ်ခြား အပြင်က အော်နေ၊ ဝေဖန်နေသူ တွေကရော နိုင်ငံအတွက် ပြည်သူလူထု အတွက် ဘယ်လောက်အချိန်ပေးစဉ်းစား နေခဲ့ဘူးလဲ။
နိုင်ငံမှာ ကိုယ့်အကျိုး ကိုယ်နေရာ ရဖို့ စဉ်းစားတာနဲ့ နိုင်ငံက ပြည်သူတွေ အကျိုး အတွက် စဉ်းစားတာ လုံးဝ ကွာ ခြားတာ တော့ လူတိုင်း သိပါတယ်။
ဒီတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမှား လုပ်မိတာ၊ အမှားစဉ်းစားမိတာ ဆိုရင်တောင် အဲဒီလို ကိုယ့်အကျိုး အတွက် နိုင်ငံရေးလုပ်သူတွေ ပြောနေတာထက် ပိုပြီး အကျိုးများ မှာ အသေအချာပါ။
ကိုကြောင်ကြီး လဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမှားရှိရင် ဝေဖန်ထောက်ပြခွင့်ရှိပါတယ်။
သူကြီး ဒီရွာ တည်ထောင်ထားတာ အများအတွက် အပြုသဘောဆောင်တာတွေ ကို ရေးပြ၊ ထောက်ပြဖို့ဘဲ မဟုတ်လား။
ကျွန်မ အသေအချာ ပြောရဲ ပါတယ်။ သူဟာ ပြည်သူ့ အသံကို နားထောင်နေမှာပါ။
ပြီးတော့ လိုက်လုပ်ဖို့သင့်ရင် လုပ်မှာလို့ လဲ ကျွန်မ အကြွင်းမဲ့ ယုံတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လို လူမျိုးဟာ သူ့တစ်ယောက်ထဲ ကြိုက်သလို လုပ် မဲ့ သူမျိုး လုံးဝ (လုံးဝ) မဟုတ်ဘူးဆိုတာ လဲ ကျွန်မ အကြွင်းမဲ့ ယုံတယ်။
အဖွဲ့အစည်း ရဲ့ သဘောနဲ့၊ အကြံပြုချက်တွေနဲ့ ညှိလုပ် မဲ့သူမျိုးပါ။
သူ့အဖွဲ့အစည်း ကသူတွေဟာလဲ ကိုယ့်အတွက် ဆိုတာကို ရှေ့တန်းထားပြီး လုပ်တာမဟုတ်ဘဲ သူ့လိုဘဲ တိုင်းပြည်က ပြည်သူတွေ အတွက် ဦးစားပေး စဉ်းစားသူတွေဖြစ်မှာပါ။
လက်ရှိ အာဏာရ သူ တစ်ချို့ ဟာ ပြည်ပက နိုင်ငံရေးသမား တစ်ချို့ ထက်ပိုပြီး နိုင်ငံ နဲ့ ပြည်သူတွေ ကိုချစ်တာသက်သေရှိခဲ့ရင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အဲဒီ လက်ရှိ အာဏာရသူ တွေ နဲ့ ပူးပေါင်းတာကို ကျွန်မတော့ ဘယ်လိုမှ အပြစ်မြင်လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သဘောကတော့ ပြည်သူတွေ အတွက် စေတနာ အမှန်နဲ့ စဉ်းစားပေး လုပ်ကိုင်ပေးသူ ဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှမဟုတ် ဘယ်သူကို မဆို ကျွန်မတော့ လေးစားချင်ခင်မှာပါဘဲ။
ကျွန်မ “လူ” ကို ရွေးပြီး မထောက်ခံပါ။
“မူကောင်း၊ စံနစ်ကောင်း” ကို တည်ဆောက်ပေး နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ “လူကောင်း” ကိုဘဲ ရွေးပြီး ထောက်ခံ အားပေး တာဖြစ်ကြောင်းလေး ……
ကိုကြောင်ကြီး ကို အသိပေးလိုက်ပါကြောင်း ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။ :-)))
နိုင်ငံရေးသမားဟု အမည်ခံ ထားသူတိုင်း ငါဘာရည်ရွယ်ချက်ကြောင့် နိုင်ငံရေး လုပ်နေတာလဲ ?
တိုင်းပြည်ထဲ က ကလေးငယ်တွေ၊ အရွယ်လွန် အဖိုးအဖွား တွေ အတွက် ရော တကယ်စဉ်းစား မိရဲ့လား ?
ပြည်သူ့ အကျိုးထက် ဒင်းတို့လက်ရှိ အာဏာရှင်တွေ ကို ငါတို့နိုင်ရမယ် ဆိုတဲ့ အညိုး အာဃာတ လက်စားချေ ဖို့ အတွက် လား ?
ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိုးသားစွာ ပြန်ဖြေပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဝေဖန်သုံးသပ်ရန်။
ဘုန်းကြီး (ကိုကြောင်) ကို စာချခြင်းလဲ မဟုတ်ပါကြောင်း။
ကိုကြောင့် အမည်သုံးပြီး Post တင်ရတာ လုပ်စားဖြစ်နေပြီလားတောင် မသိ။
ဒါပေမဲ့ သူ့ မှတ်ချက်ကို ပြန်ရေးရင်း ရှည်လွန်းလို့ Post တင်လိုက်တာပါ။
သွဲ့ လောက်နဲ့တင် ဂလောက် သွက်သွက်ခါနေတာ..
ထောက်ခံတယ်လောက်ပဲ ပြောတတ်တာမို့ နောက်လာမဲ့
အားပါတဲ့ ကွန်မန့်တွေကိုလည်း သေချာစောင့်ဖတ်နေတယ် ဆိုတာလေး.
ဝေဖန်တာအလုပ်တတ်ဆုံးအိုဘားမန်းတွေ နဲ့ နိုင်ငံရေးဆိုတာ
အဝေဖန်ခံနိုင်ရမယ် ဆိုတာကြီးကတော့ လိုက်ဖက်လွန်းနေသကိုးး
နိုင်ငံရေးဆိုတာ လေကန်နိုင်ရမယ် ဆိုတာကရော
မှန်လိုက်လေ စာအုပ် ရယ်။
ဒါကြောင့် အိုပါးလျှောက်ပူ လေတွေပွ နေတာပေါ့။
ညဏ်မမှီလို့စောင့် ဖတ်နေပါ့ မယ်
ပြောချင်တာကို စကားလုံး ကျစ်ကျစ်နဲ့ လိုရာရောက်အောင်ပြောနိုင်တယ်။
သူမ (စု) က အဝေဖန်ခံနိုင်တာ၊ အစမ်းသပ်ခံတာ၊ မတုန်လှုပ်တာ၊ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တာ သိပါ့ဗျာ။
အဲ!!! သူ့ စွန့်လွှတ်မှု ခြေဖျား၊ နိုင်ငံအတွက်ထားတဲ့ စေတနာ အစွန်းထွက် ကိုတောင် မမှီတဲ့ ဟာတွေ က ဝေဖန်တာကို မခံနိုင်တာပါ။
စွန့်လွှတ်နိုင်သူအတွက် နိုင်ငံရေးဟာ အမြတ်ထုတ်စရာမဟုတ်ပါဘူး ဆိုသော်လည်း ……..
နိုင်ငံရေးကို ခုတုန်းလုပ်လုပ်ပြီး အမြတ်ထုတ်နေတဲ့ လူတွေနဲ့ အလျှော့အတင်းလုပ်နေတာမြင်ရတိုင်းရင်နာလွန်းလို့ပါ။
နိုင်ငံရေးမှာ အလျှော့အတင်းရှိတာ လက်ခံပါတယ်ဗျာ။
အဲလို လူမျိုးတွေ က ၁၀ ရာနှုန်းလေး လျှော့ပေးဖို့အရေး သူ့ဘက်က ၁၀၀ ရာနှုန်းထိ လျှော့နေရတာဗျ။
အစကတည်းက လုပ်ပေးသင့်တဲ့ ၁ကျပ်ဖိုးကို ခုမှ ၁၀ပြားစီ ထုတ်ထုတ်ပေးနေတဲ့ (ဒါကို တော်တော် အပင်ပန်းခံ တောင်းစေပြီးမှ ပေးပြတာ) လူမျိုးကို ကျေးဇူးတင်ပြီး ……..
ကိုယ့်အတွက် အကုန်စွန့်လွှတ်နေတဲ့ လူမျိုးမှ အပြစ်ရှာတတ်တဲ့ လူတွေကို ကယ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ သူ့သမီးကို သူ့ အဖေမြင်ရင်များ ရင်နာမလားတော့ မသိ။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့ ဒေါ်စုကို ဒီလိုမျိုးအပင်းပန်းခံလုပ်ရတဲ့ Politician အလုပ်ကိုမလုပ်စေချင်တော့ဘူး..
အေးအေးဆေးဆေးပဲ Democracy icon အဖြစ်ပဲ လိုအပ်သလောက်သာ အကြံပေး၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးတာ၊ နိုင်ငံတကာ ဧည်သည်လက်ခံတာ၊ နိုင်ငံတကာ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်သွားတာလောက်ပဲ လုပ်စေချင်တော့တယ်.. မြန်မာ့ စံပြ အနေနဲ့ လှလှလေးသာ မြင်ချင်တော့တယ်။
ခု သူ လုပ်သမျှ ဝေဖန်လေကန်နေတဲ့ ဆရာ့ ဆရာ ကြီးများနိုင်ငံကို ဦးဆောင်နိုင်ရင်တော့ သိပ်ကောင်းမှာပါပဲလေ။ အွန်လိုင်းမှာ ဝေဖန်လေကန်နေမဲ့အစားပေါ့။ ဘယ်သူက တားထားတုန်းမသိ။
ခေါင်းဆောင်ကို ဝေဖန်စရာရှိလာတဲ့အခါ ဝေဖန်ရပါမယ်။
နောက်လိုက်ကို ခေါင်းဆောင်သူရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှု့နဲ့ထိန်းကျောင်းရပါတယ်။
ခေါင်းဆောင်ကိုတော့ နောက်လိုက်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှု့နဲ့သာ ထိန်းကျောင်းနိုင်ပါတယ်။
ဝေဖန်ခွင့်မရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာ ခေါင်းဆောင်တွေ ပျက်စီးတော့တာပဲ….။
ဝေဖန်တယ်ဆိုတာက မမှားသေးတာကို သတိပေးတာ၊ မှားနေတာကို ပြုပြင်နိုင်ဖို့ ထောက်ပြတာ၊
မှားခဲ့တာကို သင်္ခန်းစာယူ ချေဖျက် ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ ညွှန်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားရှင်ရှိစဉ်က လက်ယာရံ သာဝကကြီးဖြစ်တဲ့ အရှင်သာရိပုတ္တရာကို ကိုရင်ငယ်လေးတစ်ပါးက သင်္ကန်းဝတ်တာ အချိုးမကျလို့ အပြုသဘောနဲ့ ရိုရိုသေသေ ဝေဖန်ပါတယ်။
အရှင်သာရိပုတ္တရာ က ဝေဖန်မှု့ကို ချက်ချင်း လက်ခံ ပြုပြင်ပြီး
နောင်လဲ လိုအပ်တာရှိရင်ဝေဖန်ပေးဖို့ လေးလေးစားစား ဖိတ်ကြားပါတယ်။
ယဉ်ကျေးပြီးသူတွေရဲ့ ဝေဖန်မှု့က အဲသလို သိမ်မွေ့ ပြီး ကြည်နှုးဝမ်းမြောက်စရာကောင်းပါတယ်။
ကျုပ်တို့က ယဉ်ကျေးပြီးသူတွေ မဟုတ်ကြဘူး….
ဒီတော့ အပြုသဘောဝေဖန်မှု့တိုင်းဟာ အပြုသဘော မသက်ရောက်တော့ဘူး…
အခြေအနေရော အချိန်အခါရော အကုန်ချိန်ဆ နေရတယ်။
ကိုယ်ပါရောပြီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဖက်က မဲတင်းရပ်တည်ပေးရတော့တယ်။
မူလလက်ဟောင်း ၀ါရင့်သဘာရင့် ဇတ်ဆရာကြီးတွေရဲ့ ဇတ်ညွှန်းက ခွဲထွက်ပြီး
သူမကို ချောက်ချမယ့်၊ ပြဿနာတွေပေးမယ့် ကိစ္စတွေ
သူမရဲ့ အမည် ၊ လူကြိုက်များမှု့နဲ့ ၊ လူထုထောက်ခံမှု့ကို
နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဖဲ့ချွေဖျက်ဆီးဖို့ ကြိုးစားသူတွေ ရှိလာတော့မယ်။
ကျုပ် သူ့ဘက်က ရပ်ရပါမယ်။
တကယ်တော့ ကျုပ်သူ့ကို အရမ်းကြီးမချစ်ပါဘူး…
လက်ရှိမှာ ဖြစ်နေတာလေးက သူမရဲ့သဘောရင်းစိတ်ကို
ခေတ်အဆက်ဆက် စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင်
( သက်ဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်လိုက်လို့ အရောင်အသွေး ပြောင်းတယ် )
ယနေ့ သူမအပေါ်မှာ လူဒေ ကွဲပြားစွာမြင်သွားစေတဲ့
အကြောင်းရင်းတစ်ခုဆိုတဲ့ ကီးလေးကို ထုတ်နှုတ်ပြီး
ကျုပ်စယာကျောင်ဂျီးဂို သဂျန်နှစ်သစ်မှာ ပူဇော်လိုက်ဘါဒယ်
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါဘဲ သူမဟာ တတ်သိတွေးခေါ်တတ်ရုံတင်မဟုတ်ဘဲ
စစ်အုပ်စုတွေနဲ့အစဉ်ပြေစေတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့
ဒီနေရာမှာ ရေပွက်ရာ ငါးစာချကွန်ပြစ်နေတဲ့ အုပ်စုဟာ ဘယ်သူလည်းဆိုတာ
ဆိုခဲ့ပြီးသလို သူမရဲ့ အခြေနေပေါ်မှာကြည့်ပြီး လုပ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေပေါ်မှာ
ကိုယ်က ဘာါမှ မလုပ်ကြဘဲ
အရီးစု .. ဗွာတေး မွှားလို့.. အရီးလတ်…. နိုင်ငံရေးဆိုတာ ပရိယာယ်သိပ်များတယ်၊ အလွတ်ပြောဆို ကောက်ကျစ်ပါတယ်။ ဒါသူ့ သဘာဝပါ။ ကျားတောထဲ နေတဲ့ သမင်ဟာ ဘေးကင်းရာတောထဲက သမင်နဲ့ လှုပ်ရှားပုံခြင်း မတူပါဘူး။ သက်ဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်လိုက်လို့ အရောင်အသွေး ပြောင်းတယ်၊ ဒါမှလည်း ရှင်သန်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ ဒီလိုပဲ နိုင်ငံရေးသမား ဖြစ်တာနဲ့ သူ့အမူအကျင့်တွေ ပြောင်းလဲတယ်။ ဘွားဒေါ်ကိုပဲ တိုက်ရိုက်ဥပမာထားပါ၊ အရင်နဲ့ အခု ပြောစကားတွေ တူရဲ့လားလို့။ တင်းမာ ပျော့ပြောင်း တာတွေကို မပြောဘူး၊ consistency အပြောအလုပ် ညီညွှတ်တာကို မြင်ကြည့်ပါ။ တပ်ဦးခေါင်းဆောင် တယောက်နဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တဦး တူဖို့ရာ အတော်ခက်ပါတယ်။ ပြောင်းတာနဲ့အမျှ သူ့အပေါ် ဆက်ဆံရှုမြင်ပုံလည်း မတူတော့ဘူး။ တရုတ်လို ယင်ယန်နိယာမ ခေါ်မလားပဲ။ မိသားစုမှာတောင် ပိုက်ဆံရှာနိုင်ချိန်နဲ့ နွမ်းပါးချိန် ဆက်ဆံရေး တသမတ်ထဲ ဖြစ်တာ အတော်ရှားပါတယ်။ ဘယ်ခေါင်းဆောင်မှာမဆို ဟန်းနီးမွန်းကာလ ခေါ်တဲ့ အချိန်ရှိတယ်၊ ဘယ်သူမှ အပြစ်မမြင်ချိန်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီအချိန်သည် များသောအားဖြင့် လူထုခေါင်းဆောင်တွေ အာဏာရချိန် တနှစ်အတွင်း ဖြစ်တတ်တယ်။ ဘွားဒေါ်က အဲဒီအခွင့်အရေးကို အတိုက်အခံ ဘဝမှာတင် ဖြုန်းပစ်တယ် (သုံးတယ်ပြောချင်ပြောဗျာ)။ ကျမက အများကြိုက် နိုင်ငံရေး မလုပ်တတ်ဘူး၊ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ကတိဘာညာ မပေးဘူး အပြောမျိုးတွေသည် အရေးတော်ပုံ ပြင်ပကာလမှာ နိုင်ငံရေးစကားလုံးအဖြစ် တာသွားပါတယ်။ ကာလံ ဒေသံ ပယောဂံ အပေါ် မူတည်ပြီး အဓိပ္ပါယ် ပြောင်းတဲ့သဘောပါ။ ဘွားဒေါ်အနေနဲ့ အခြေအနေကို အခွင့်ကောင်းယူ နိုင်ငံရေးအမြတ် မထုတ်တတ်ဘူးတို့ ဘာတို့ဆိုတာကိုက နိုင်ငံရေးစကား ဖြစ်သွားပါမယ်။ နိုင်ငံရေးနယ် ရောက်နေပြီးကိုး.. ပြောသမျှ လုပ်သမျှသည် နိုင်ငံရေးအကွက် ဝင်နေရပါပြီ။ မရည်ရွယ်ဘူး ထားအုံး သူတယောက်ထဲ မဟုတ်ဘူးလေ၊ သူ့လူတွေက အဲဒီအကွက် မနင်းတော့ဘူးတဲ့လား။ လူသုံးယောက် ရှိရင် နိုင်ငံရေး မြောက်တယ်ဆိုတယ် စကားရှိထားတယ်။ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရနဲ့ ကြံ့ဖွတ်တွေက နိုင်ငံရေး အကွက်ရွှေ့နေတယ်၊ ဘွားဒေါ်က မသိချင်ဆောင် ဝင်ကပြတယ်။ အဲဒါ နိုင်ငံရေးပါပဲ။ လိုချင်မှုတခုအတွက် ရှိထားတဲ့အရာတွေနဲ့ လဲယူတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်က တန်းမြင့်နေတော့ တဖက်နဲ့တူတဲ့ အောက်တန်းကို ဆင်းတယ်။ အဲဒီမှာ မူလသတ်မှတ်ချက် စံနှုန်းတွေပါ နိမ့်ဆင်းလာတဲ့ သဘောပါ။ ဘုန်းကြီးဘဝ ဘုရားထူး ခံရပေမဲ့ လူသူတော်လည်းဖြစ်ရော ကပ္ပိယတွေက ရဲရဲတင်းတင်း ပြောဆိုလာကြတာ နားလည်သင့်တယ် ထင်တာပဲ။ အခုတော့ ဒီလောက်ပဲ မန်းမယ်ဗျာ။
ကကြောင် – တန်ဖိုးရှိတဲ့ စကား တွေပါ။
မြန်မာနိုင်ငံရေးအခြေအနေက မြင်မိတာက အစာရေစာငတ်ပြီးဆေးရုံဆင်းလာတဲ့ လူမမာအမျိုးသမီးကို မယ်ရွေးပွဲဝင်ပြိုင်ခိုင်းသလိုဖြစ်နေတယ် ကာယကံရှင်နေရာကလဲကြည့်ပေးကြပါဦး အတတ်နိုင်ဆုံးအနေအထားတွေပေးဆပ်ခဲ့ ပေးဆပ်နေတာပါ အခြေအနေနဲ့အချိန်အခါကိုနားမလည်ဘဲ ရာဇသံတွေဘဲပေးနေတယ်လို့မြင်မိတယ် သူများအလိုက်၁၀ခါလိုက်လည်း မလိုက်တခါရှိခဲ့ပါမူ ကြီးစွာရန်သူစွဲမှတ်ယူ၏လိုဖြစ်နေတယ် ဒေါ်စုဟာဗေဒင်မေးပြီးကံယုံပြီးဆူးပုံမနင်းတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းမို့ သူမဘာလုဎ်လုဎ်နားလည်မိတယ် ကျန်တာကဒေါ့ အချင်းများရင်အပြင်းဖျားဖို့ဘဲကျန်ပါတယ်
ယူအက်စ်ကို အုပ်ချုပ်နေသူ အစိုးရ..တရားရေး.. လွှတ်တော်ထဲကလူတွေ.. ပါတီအချင်းချင်းတွေ.. အပြန်အလှန်”ချ”နေကြတာပါပဲ..
လွှတ်တော်ထဲဆဲကြ.. အပုပ်ချကြ.. သူများတိုင်းပြည်တွေများ.. ထသတ်ကြတာတောင်ရှိသေး..
ဒါပေမယ့်သူတို့ဟာ.. ကပီတိုဟေးလ်မှာတူတူနေ.. တူတူစား..တူတူသွားနေကြတာပါ..။
သူတို့ဘာလုပ်သလည်းဆိုတော့.. တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့.. အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားရည်ရွယ်လုပ်တယ်..။
လူထုကတော့.. တကယ်တော့ ဘာမှသိတာမဟုတ်..
ယူအက်စ်လို.. ပွင့်လင်းမြင်သာ.. ဘာညာအော်ထားတဲ့.. ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်.. ပါ့ဗလစ်ချပြထားတာ.. လူတွေသုံးစွဲယူငင်ဖတ်ကြည့်နိုင်တာ.. အများးးးးကြီး..အခွင့်အရေးပေးထားတဲ့တိုင်းပြည်…
ဒါတောင်.. အဲဒီလူထုက..ဘာမှသိပ်သိကြတယ်မဟုတ်..။ သိဖို့လည်းမလို..။
မသိသူတွေ..ဖြစ်ပေမယ့်.. လူထုဟာ.. ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားမထိခိုက်အောင်..ဆန္ဒပြခွင့်.. တောင်းဆိုခွင့်ရှိပါတယ်..
အဲဒီလိုဖြစ်လာရင်.. .. ထိမ်းကြောင်းရင်း.. လမ်းကြောင်းရင်း.. တိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွား.. လူထုအားလုံးအကျိုးစီးပွားရအောင်.. မျှယူ.. ဆွဲယူသွားရမှာ နိုင်ငံရေးသမားများရဲ့တာဝန်..
အခုတော့ ဒီလောက်ပဲ မန်းမယ်ဗျာ။ :harr:
ကြုံလာသမျှ အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းတွေကို ခေါင်းမရှောင်ပဲ ခေါင်းဆောင်ကောင်းပီပီ တည့်တည့်မတ်မတ် မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြေရှင်းနိုင်လို့….
ဒီတခါလက်ပံတောင်းတောင်ကိစ္စမှာလည်း အမေစုရဲ့ ဂုဏ်ရည်ဟာ ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ အမြင်မှာ ပိုမိုထင်ရှားပေါ်လွင် တောက်ပြောင်လာတယ်။
လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် လူကောင်းနဲ့ လူတော်ဆိုတဲ့ အရည်အချင်း၂ရပ်လုံး ပြည့်စုံဖို့လိုတယ်တဲ့။
အမေစုကတော့ လူတကာ့ လူ :hee:
ဒေါ်စုကို မီးခဲနဲ့ ဥပမာပေးချင်ပါတယ်။
သူ့ကို ငြိမ်းပါစေ ရည်ရွယ်ပြီး လေနဲ့ ၀ိုင်းမှုတ်နေကြတာကြောင့်
ဖုံးနေတဲ့ ပြာတွေ လွင့်ပြီး ပိုပိုတောက်လာမယ့် မီးခဲပါ။
လူကို သံယောဇဉ် ပိုရှိနေကြပုံ ပေါက်နေကြတယ်၊ တလျှောက်လုံး (စစ်အစိုးရတခေတ်လုံး) ဆိုက်ဝါးမိလာတာတောင် လေးစားမိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူ လုပ်ရမှာတွေက အများကြီးမှ တကယ့်အများကြီး၊ ၁၅ ကျရင် သမ္မတ (အခုထိတော့ အရိပ်အယောင် မမြင်ရသေးဘူး) ဖြစ်လာရင်တောင် ဝန်ကြီး ၃၅ယောက်ကို ကိုယ့်လူတွေ ပေးချင်ရင် တောင် လူမရှိဘူး၊ လက်ရှိလူတွေ အဆင့်တိုးပေး ရင်ကောတဲ့ ။တပ်ကလူတွေ ညွှန်မှုး ၊ညွှန်ချုပ် နေရာတော်တော်ယူထား ပြီးပြီ ၊ ပြေးမလွတ်ဘူး၊ ထိန်းနိုင်ပါ့မလား တဲ့။ စိန်ခေါ်မှုတွေက နေရာတိုင်းမှာပါ။
ကို awra-cho ပြောထားတာ သွေးထွက်အောင် မှန်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်ထဲ မှာ အင်မတန်တော်ပြီး လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိတဲ့ ပါးစပ်ပိတ်ထားကြရ တဲ့ ပညာရှင်တွေ အများကြီးပါဘဲ။
သူတို့တွေ အကြောက်တရားထဲက လွတ်ဖို့ ဘဲ လိုပါတယ်။
တပ်ကလူတွေ ထဲ မှာလဲ ထက်မြက်တဲ့ လူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
တိုင်းပြည်အတွက် တကယ် အလုပ်လုပ်မဲ့၊ အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ သူတွေ ဆို ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် အစိုးရအဖွဲ့မှာ ရှိတာကောင်းပါတယ်။
အရည်အချင်းမရှိ သူတွေဆို ဘယ်ဘက်ကဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဖယ်လိုက်ဖို့ပါဘဲ။
လူကို မုန်းလို့ ဖယ်တာမဟုတ်ဘဲ လုပ်နိုင်သူ ကို နေရာပေးတဲ့ သဘောဖြစ်သင့်ပါတယ်။
ကိုယ့်အတွက် လုပ်ရင်း အများအတွက်ပါ ပါအောင် လုပ်လို့ ရနိုင်ပါတယ် မဟုတ်လား။
တိုင်းပြည်ကို စေတနာရှိတဲ့ စိတ် အများကြီး မဟုတ်တောင် နဲနဲ ရှိရင်ကို ဟုတ်လှပါပြီ။
အခုဟာက ကိုယ့်ဖို့ကြီး ကြည့်နေကြလို့ပါ။
တကယ်တော့ စိမ်ခေါ်မှု တွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှာတင်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။
ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ထဲ ၊ အဖွဲ့အစည်း တစ်ပါတီ ထဲ၊လူ တစ်စုတစ်ဖွဲ့ ထဲ နဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးကောင်းအောင် လုပ်နိုင်ပါ့မလဲ။
တိုင်းပြည်က လူတစ်ဦးတိုင်း တစ်ယောက်တိုင်း မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
တိုင်းပြည်က လူတစ်ဦးတိုင်း တစ်ယောက်တိုင်း စိမ်ခေါ်မှု တွေကို ရင်ဆိုင် နေရတာပါ။
ဒီ စိမ်ခေါ်မှု တွေက အားလုံးညီညီညာညာ ဖြေရှင်းနိုင်မှ လိုရာပန်းတိုင်ရောက်မှာပါ။
ကိုယ်ကတော့ ဘာမှမလုပ်၊ ဘာမှ မပူးပေါင်းဘဲ မင်းတို့ လုပ်နိုင်မလား။ ကြည့်ကြသေးတာပေါ့။ ဆိုတဲ့ လူတွေ များ နေရင်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လဲ ထိထိရောက်ရောက် ဘာမှ လုပ်ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ က နိုင်ငံသားတိုင်း မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
ကိုယ်တိုးတက်ဖို့ အတွက် နိုင်ငံကို အရင်တိုးတက်အောင် လုပ်ရမယ်၊ကိုယ်တစ်ဘို့ ထဲစိတ်တွေ ကို ထားခဲ့ရမယ် ဆိုတာတွေဟာ နိုင်ငံသား (ကျားမ အလုပ်အကိုင် ဆင်းရဲ ချမ်းသာ ရာထူး ဂုဏ်သိမ် မရွေး) အားလုံး ကို စိမ်ခေါ် နေတဲ့ အကြောင်းပါ။
ဒီတော့ နိုင်ငံတိုးတက်မှု မထူးခြားတာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို အပြစ် မဖို့ ဘဲ အားလုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကို မှန်ထဲ ပြန်ကြည့် မေးကြည့်ဖို့ အချိန်ပါ။
ဦးတည်ရာ တစ်ခုကို ပြိုင်တူ တွန်းမှ ရွေ့မှာပါ။
မဟုတ်ရင်တော့လဲ ကံကြမ္မာလား၊ ကျိန်စာလား၊ မညီညွတ်မှုလား၊ ပတ်မကြီးထိုးဖောက် နေကြလို့လား။
ဝင်ဆွေးနွေးပေးသူ အားလုံး ကို ကျေးဇူးပါ။
တစ်ယောက်ချင်း ကို မပြောဖြစ်ခဲ့တာ စိတ်မရှိကြပါနဲ့။
ဆိုတာကို ဘဲ စိတ်ပူပါတယ်။
ကျနော်အမြင် သူကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့နှစ်ကာလအကြာကြီးထဲမှာ အချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာ
အသုံးချနိုင်ခဲ့လို့ အခုလိုအတွေးအမြင်တွေ ပြောင်းလဲ သွားတာလားလို့လဲ တွေးမိပါတယ်။
ဆိုတာကိုတော့ ကျနော်တို့ခေါင်းထဲမှာ အမြဲထည့်ထားမှဖြစ်မယ်လို့ ခံယူပါတယ်။
ဒေါ်စုမှာ.. အစိုးရဖွဲ့နိုင်လောက်အောင် အရည်အချင်း..အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူမရှိပါ..။:kwi:
ဝန်ကြီး ၃၅ယောက်ကို ကိုယ့်လူတွေ ပေးချင်ရင် တောင် လူမရှိဘူး၊
သူကြီး ပြန် ကုဒ် တာကို ပြန်ဖွ ပါတယ်။
ဒီလို ဗြဲလရမ်းဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေ အချိန်အခါမှာ သူလူကိုယ့်လူ ခွဲရတော့ မကောင်းပါဘူး။
တိုင်းပြည်အတွက် တကယ်လုပ်ပေးချင်ပြီး လုပ်လဲလုပ်ပေးနိုင်သူတွေ အများကြီးပါ။
NLD ထဲမှာ “အစိုးရဖွဲ့နိုင်လောက်အောင် အရည်အချင်း..အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူ တွေ” တကယ်ဘဲ ရှိမရှိ ကျွန်မလဲ မသိပါ။
ဒီမရှိသေးရင် ရှိလာအောင်လုပ်ရမှာ မဟုတ်ဘူးလား။ (“IF”)
အရည်အချင်းရှိ သူတွေ ဝင်လာအောင် သိမ်းသွင်းရမှာ ပါတီဝင် တွေ ရဲ့ တာဝန်ဘဲ။
ဒီအချိန်မှာ NLD ပါတီဝင်ရင် သိတ်ပြီး ကြောက်စရာမကောင်းတော့တဲ့ အခြေအနေပါ။
ဒီလို အရည်အချင်းရှိ လုပ်နိုင်သူတွေသာ NLD ထဲ အခုဝင်တာကို (ပြန်ပေါင်းတာကို မဆိုလိုပါ) အပြစ်တင် ကြမှာလား။
လက်ရှိ NLD ထဲ က လူတွေကလဲ ဒီလိုလူတွေ လာပေါင်းပြီး နေရာယူရင် သဘောထားကြီး မှာလား။
နေရာ ဆိုတာ ရှေ့ရောက်လာရင် လမ်းပျောက်မှာ အသေအချာဘဲ။
ဒါကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထိန်းနိုင်မှာလား ဘဲ ရှိပါတယ်။
တကယ်တော့ ပြည်ပက သွေးထိုးတဲ့ အန္တရာယ်၊ လက်ရှိ စစ်အစိုးရ အန္တရာယ် ထက် အချင်းချင်း နေရာလု အမုန်းပွါး အရည်အချင်းရှိသူ တွေကို နေရာ မပေးချင် တာတွေက ပိုပြီး ကြီးမားတဲ့ စိမ်ခေါ်မှု အန္တရာယ် ဖြစ်လာမှာပါ။ အရင်က တွေ့ဘူးခဲ့တဲ့ ခါးသီးမှုတွေ က ကိုယ့် အဖွဲ့ထဲ ရောက်လာတာ ကို သင်ခန်းစာ ယူရမှာ သတိပြုရမှာပါ။
ဒီတော့ ကျွန်မ မေးတဲ့ မေးခွန်း ကို ပြန် ကုဒ် ပါတယ်။။
ကိုယ့်အတွက် လုပ်နေသူတွေက များ၊
အရှုပ်ထဲ ဝင်မပါဘဲ အေးအေး နေချင်သူတွေက များ ဆိုရင်တော့ လဲ
အရင်အတိုင်းဘဲ ပျော်ပျော်ကြီး ဆက် နေနေကြရုံပါဘဲ။
ဘာမှတော့ ထူးပြီး အံ့ဩစရာမရှိပါဘူးလေ။
ဒီလောက် နှစ်ပေါင်း၃၀နီးပါး ရှိခဲ့တာတောင် ဘက်ပေါင်းစုံက ကြိုးစားပေးနေတဲ့ ရှားပါးခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လိုမျိုး မထွက်လာတာ ကိုတော့
အံ့ဩ ရမလား။ မအံ့ဩ ရဘူးလား။
ကျွန်မ ကိုယ်တိုင်လဲ အပြင်က နေ လေပွ နေတာဘဲ မဟုတ်လား။
(လေပွ အတွက် စီဒီ – ကထူးဆန်း လျှောက်ပူ)
ဒေါ်စုယူအက်စ်လာတော့.. သတိပေးတာတွေနဲ့အတူ.. လူလာရှာတာလို့.. သဘောပေါက်မိတယ်..။
ယူအက်စ်မှမဟုတ်.. ကမ္ဘာပါတ်ရင်း.. မြန်မာတွေနဲ့လိုက်တွေ့တာ.. အဲဒီအကြောင်း..အဓိကလို့..ထင်မိတယ်.။
သတိပေးတာကတော့.. ပြည်ပကနေ မြန်မာပြည်အတွက်ဆိုပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်နေသူတွေကို.. ရပ်ခိုင်းတာပါ..။
ပြိးတော့ အတူတူလုပ်ခဲ့တဲ့.. လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်ဟောင်းတွေ.. လူတော်တွေ.. လာရှာတာပါ..
အဲဒါက.. သူ့အတွက်.. တော်တော်ခေါင်းခဲနေပုံပေါက်ပါတယ်..
ဒီလိုကမ္ဘာနဲ့ ယှဉ်ချရမယ့်ခေတ်ကြီးမှာ.. တိုင်းပြည်ကိုစေတနာရှိယုံ.. လုပ်ချင်စိတ်ရှိယုံ.. အနစ်နာခံနိုင်ယုံတို့နဲ့.. အစိုးရအဖွဲ့ထဲပါ.. အလုပ်တက်လုပ်လို့မရနိုင်တော့ပါ..
ဒီပို့စ်နဲ့ ကိုမျိုးသန့်ရဲ့ တိုက်ကြီးအမတ်ဒေါ်မေနှင်း ကို ပေါင်းဖတ်ပြီး
၂၀၁၅ တွက် စိတ်ပူမိတယ်။
အချိန်နည်းနည်းလေးကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချပြီး တိုင်းပြည်က လက်ခံနိုင်မယ့် လူတော်လူကောင်းတွေ ပေါင်းစည်းနိုင်ပါစေ။